Momba anay - IFORCE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
IFORCE INTELLIGENT FAMPIANARANA CO., LTD
IFORCE INTELLIGENT FAMPIANARANA CO., LTD orinasa feno naorina tamin'ny Oktobra 2001, dia manam-pahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana milina kitapo tenona. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia misy ireto manaraka ireto: Flat Yarn Extruder ， Cam Winding Machine, Machine boribory boribory, milina fanontam-pirinty BOPP, milina fanamainana, milina fanodinam-bolo mandeha ho azy, milina fanamafisam-peo ultrasonika, milina fanamafisam-peo, masinina fanadiovana bobbin-javamaniry bobina, mpamaky plastika ary famerenana milina fanodinana. sns. Ny vokatray kintana, milina fanetezana automatique & fanjairana ho an'ny kitapo PP tenona, milina fanodinana mandeha ho azy & milina fanontam-pirinty ho an'ny kitapo tenona PP, fanodinana mandeha ho azy & fanjairana & fantsom-pifangaroana miendrika mafana ho an'ny kitapo tenona PP, fanjairana mandeha ho azy & fanontana pirinty ho an'ny kitapo tenona PP , Famonoana mandeha ho azy & fanjairana & fanontana milina mifangaro ho an'ny kitapo PP tenona, fanodinana mandeha ho azy & fanisarana & fanjairana milina mifangaro ho an'ny kitapo PP tenona sy milina fanontam-pirinty kitapo sns. (Ny ankamaroan'izy ireo dia vokatra misy patanty novolavolain'ny orinasa), izay be mpampiasa amin'ny fonosana vokatra avy amin'ny indostria toy ny akora fananganana, ny injeniera simika, ny fambolena, ny sakafo ary ny dock. Miorina amin'ny ambony rehetra, afaka manome ny mpanjifa ny tsipika feno isika, toy ny tsipika famokarana kitapo PP, tsipika famokarana kitapo BOPP, tsipika famokarana soatoavina ara-dalàna PP, tsipika famokarana valizy ambany valizy, kitapo harato, kitapo Leno, Kitapo famokarana kitapo Raschel sy tsipika famokarana soatoavina Kraft sns.
Ny orinasa dia miorina amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia any amin'ny faritany - Jinan Jibei Industrial Park. Izy io dia mifanila amin'ny tanànan'i Jiyang County taloha ary eo amin'ny sisin'ny làlam-pirenena 220, ny làlambe faritany 248 sy 249, atsimo dia ny làlambe Jinan-Qingdao, akaikin'ny andrefana dia i Beijing - lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha any Shanghai ary Beijing - Lalam-by Fuzhou. Ankoatr'izay, ny orinasa dia 23 km miala ny tanànan'ny Ji'nan, ary 10 km miala ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Ji'nan. Ireo tranga etsy ambony dia mandray anjara amin'ny fifamoivoizana mety.
Hatramin'ny niorenany, ny orinasa dia nahatratra teknolojia matihanina matanjaka ary nanisy lanjany lehibe ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia ary ny fampidirana talenta, ka nanasa an'i Han Zhongshi, ilay manam-pahaizana momba ny automation taloha sy injenieran'ny Samsung Group, hitarika sy handray anjara amin'ny vokatra famolavolana vokarin'ny fanafainganana ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ary ny fampiharana 6 patanty nasionaly. Miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny "Quality First, Customer First", ny mpiasa dia nampihatra tanteraka ny rafitra kalitao ISO9001 mba hahafahan'ny kalitaon'ny serivisy sy ny kalitaon'ny vokatra manome fahafaham-po bebe kokoa ny takian'ny mpanjifa. Ny fotokevitra momba ny asa "Ny rehetra ho an'ny mpampiasa, ho an'ny mpampiasa rehetra ary ho an'ny mpampiasa rehetra" dia voafaritra rehefa naorina ny Orinasa. Ny orinasa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ny tahan'ny vokatra ary mahafeno ny filan'ny tsena amin'ny fomba fiasa miovaova sy ny fomba fitantanana mandroso. Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia mitombo isan-taona ny fizarana tsena anatiny
ary mitazona fampivoarana haingam-pandeha haingam-pandeha. Ny salanisa mitombo isan-taona amin'ny sanda famokarana dia 38%, ary maherin'ny 1.000 ny fitaovam-pamokarana novokarina tamin'ny 2012, ka nahazoana lanja famokarana an-tapitrisany isan-taona. Ny orinasa dia lasa orinasa kintana izay afaka mamolavola sy mamokatra fitaovana fonosana feno herinaratra mandeha ho azy sy feno fonosana feno fahendrena any amin'ny faritanin'i Shandong ary na dia i China aza, satria ny orinasa dia mahazo fahatokisana sy fahafaham-po amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny hevitra fitantanana mety sy drafitra maharitra, fitantanana famokarana hentitra. , midika fanaraha-maso feno, hery ara-teknika matanjaka, tambajotra fivarotana mahery vaika ary fihetsika feno fahasoavana.